Jasiiradaha Marquesas, janno | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Meelaha Dalxiiska loo tago, Guides
Buuraha, dhirta cagaaran ee cagaaran, badda buluuga ah, xeebta iyo qorraxda, soo koobitaan wanaagsan oo ah waxa Jasiiradaha Marquesas. Jasiiraddan waxay u jirtaa Tahiti 1.500km waana janno run ah.
Haddii aad jeceshahay muuqaalka noocan ah, dhaqanka Baasifigga, dhiirrigelinta nolosha oo aad ku raaxeysatid waxqabadka banaanka, ku soco meeshii Gauguin iyo Brel ay ku dhex socdeen ama ay ku quusteen adduun biyo hoosaad cajiib ah, ka dib meesha aad u socotaa waa Marquesas, sida maanta oo kale aan nahay. Halkan waan tagnaa!
Waxay yihiin jasiirado u jira 1.500 kiilomitir Tahiti oo hareeraheeda ka kooban laba iyo toban jasiiradood, laakiin lix keliya ayaa deggan. Maanta waxay haystaan ​​dad ku dhow 9200 oo qof iyo xarunteeda maamul waa Nuku Hiva.
Jasiiraduhu waa isku dhaf qurux badan oo ah xeeb ciid ciid ah oo leh riyooyin riyooyin ah. Hayso moutains, waxay leeyihiin dooxooyinka, waxay leeyihiin biyo-dhacyo, markaa waxqabadyada ay bixiyaan way badan yihiin: fuulitaanka faraska, socodka, 4 × 4 gawaarida jeep, quusitaanka, snorkelling… Iyo sidaan kor ku soo sheegnayba, fanaaniinta Gauguin iyo Brel waxay halkan ku wareegeen bilawgii qarnigii XNUMXaad iyagoo raadinaya nabad yar. Wayna heleen weligeed maxaa yeelay xitaa halkan waa qabriyadeedii, Qabuuraha Calvaire.
Si ka duwan jasiiradaha kale ee ku yaal French Polynesia, halkan ma jiraan maraakiib ama maraakiib maraakiibta ilaaliya oo ilaaliya xeebta. Wiilka jasiiradaha fulkaanaha oo ah geeso fiiqan, oo ah buuro fiiqan oo ka soo kacay qaraxyada magma, oo leh keymo iyo dooxooyin dhaadheer. Ku saabsan yahay mid ka mid ah jasiiradaha ugu fog adduunka, aad uga fog cufnaanta qaaradaha oo dhan, si aad u badan oo ay u leeyihiin aaggooda waqti u gaar ah.
Jasiiradda ugu weyn ee kooxdu waa Nuku Hiva. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda Mystic waxayna leedahay goobo badan oo xiiso leh: the Hakaui Valley Waterfall, kan saddexaad ee adduunka ugu sarreeya, ayaa xeebta madow ee Anaho, godadka biyaha hoostooda kaas oo ilaaliya dhir iyo duunyo cajaa'ib leh iyo Cathedral of Notre Dame oo leh wakiil alwaax iyo dhagax xardhan oo ah jasiirad kasta. Halkan magaalada ugu weyn waa Taiohae, caasimada maamulka jasiiradaha.
Dhibicdeeda ugu sarreysa waa Mount Tekao, oo leh 1.185 mitir, mana haysato xamaal dhagax ah ama xeeb fidsan. Jasiiradda wuxuu leeyahay khasnado badan oo taariikhi ah, Guryaha polynesian-ka qaabka dhagxaanta, qalcado iyo macbudyo. Faransiisku wuxuu ku darsaday 1842. Markii ugu horreysay waxay u heellanayd ka-ganacsiga sandalwoodka waxayna joojisay whalers, si ay hadhow nafteeda ugu sii huraan dhoofinta miraha.
Jasiiraddu waxay leedahay xeeb galbeed aad u qallafsan, oo leh xeebo yaryar oo u kala baxa dooxooyin dhaadheer. Ma jiraan tuulooyin ku xeeran halkan. Waxay ku taal xeebta woqooyi inay jiraan labada dekedood ee ugu muhiimsan, oo leh xeel dheer: Anaho iyo Hatihe'u A'akapa. Dhanka koonfureed waxaa ku yaal meelo kale oo xeeb ah halkaan waxaa ku yaal dekedo badan. Gudaha waxaa jira seero cagaaran oo lo'da lagu dhaqo.
Sidii aan horay u sheegnay, xarunta maamulka waa Taioha'e, koonfurta. Weligaa ma aragtay Badbaadiye, taxanaha TV? Waa hagaag, Nuku Hiva xilli afaraad ayaa la duubay, 2002.
Jasiiradaha Marquesas waxaa loo qaybiyaa jasiiradaha waqooyiga, waxaa jira sideed waxaana ka mid ah Nuku Hiva; jasiiradaha koonfureed, toddobada, iyo qaar buuro ah oo aan noqon jasiirado u jira woqooyiga. Jasiiradda labaad ee ugu muhiimsan waa Hiva Oa, sidoo kale jasiiradda labaad ee ugu weyn kooxda iyo gudaha jasiiradaha koonfurta.
Halkan waa magaalada dekedda leh ee Atuona bogganna badiyaa waa dekedda ugu horreysa ee maraakiibta ka gudbeysa Baasifigga ee taabashada galbeed. Waxaan dhihi karnaa taas Waa jasiiradda leh taariikhda ugu badan kooxda maxaa yeelay waxaa ku jira taallo aad u duug ah oo Tiki ah waxayna ahayd meesha halkaas oo uu ku dhintay rinjiile Paul Gauguin iyo muusikiiste Jacques Brel. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Beerta Marquesas maxaa yeelay waa mid aad u cagaaran oo bacrin ah.
Hiva Ova waxay leedahay xeebo leh xeebaha iyo buuraha meesha lagu quusto lagu quusto, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay jasiirad mararka qaar umuuqda mid keligeed gooni u taagan, aamusan, ku dhowaad go'doon ah. Magaalada ugu muhiimsan waa Atuona, dhinaca koonfureed ee Taaao Bay, oo ay ilaaliyaan labada buurood ee ugu dheer jasiiradda, Mount Temetiu iyo Mount Fe'ani.
Jasiirad kale ayaa ah Ua Pou, jasiiradda saddexaad ee cabirka leh. Waxay leedahay weyn tiirarka basalt, wax soo saarka fulkaanaha, oo lagu baabtiisay magaca halyeeyada halyeeyada ah, Poumaka iyo Poutetaunui. Sannadkii 1888-kii ayay ahayd tiirarradan kuwa dhiirrigeliyey Robert Louis Stevenson inuu sheego inay u ekaadeen fallaadhihii fulkaanaha ee u ekaanayay daarta kiniisadda, markay fiirinayaan bannaanka tuulada Hakahau, tan ugu muhiimsan jasiiradda.
Ua Huka waa qurux qurux badan, bikrad la'aan. Waxaa jira fardo duurjoogta ah, dalal midabka lamadegaanka, riyaha ... Tahuata waa dhinaceeda jasiiradda ugu yar oo ay ku nooshahay. Laakiin waxaa garanaya sahamiyihii caanka ahaa ee Ingiriiska, Captain Cook, oo booqday qarnigii XNUMX-aad. Kaliya waxaa biyaha looga heli karaa Hiva Ova marka waa safar lagu taliyay. Dooxooyinkeeda wax soo saarka leh waxay iska indha tirayaan badaha leh biyo nadiif ah, oo deggan oo deggan oo guriga u qaadaya cadarka maxalliga ah, the Dheriga jacaylka sida ay halkan ku yiraahdaan, saliid boqol sano jir ah.
Fatu hiva waxay leedahay buuro dhaadheer oo dhaadheer oo badda dhexdeeda ku soo bandhiga kana bixiya aragtiyo yaab leh xagga sare. Sanadkii 1937 sahamiyaha Thor Heyerdahl iyo xaaskiisa, muddo ayey sii joogeen halkaan oo waxay ku soo koobeen khibradooda buug. Waxay umuuqataa in waxbadan isbadaleen ilaa waqtigaas. Inta badan dadka degan waxay ku nool yihiin tuulada Omoa iyo hareeraheeda, deked. Aagga Hana Vave waxaa ilaaliya kuwa caanka ah Bay bikradaha ah, qurux badan meelkasta oo aad ka eegtid, gaar ahaan qorrax dhaca ...
Ma jeceshahay jasiiraddan? Haddii aad dareento inaad la kulantid qof ahaan markaa fiiro gaar ah u yeelo macluumaad wax ku ool ah taas oo aan uga tagayo hoosta, anigoo marwalba ogaanaya inay yihiin jasiirado aan kujirin marinkii dalxiiska ee caanka ahaa ee loo yaqaanay French Polynesia: Jasiiradaha Bulshada, Bora Bora, Moorea, Tuamotu Atolls iyo Leeward Islands.
waxaa jira lix jasiiradood oo la degan yahay afarna waxay leeyihiin garoon diyaaradeed, laakiin waa mid maxalli ah, sidaa darteed waxaad halkaas ku gaari kartaa diyaarad ama doon. Haddii aad doorato diyaaradda waxaad ka soo duuli doontaa Tahiti oo duulimaad maalinle ah ku tagta Nuku Hiva iyo Hiva Oa. Si aad ugu tagto jasiiradaha kale, waa inaad marto mid ka mid ah labadan. Haddii, dhinaca kale, aad doorato inaad doon ku raacdo, xaqiiqadu waxay tahay in qof kasta oo shiraac ka soo maraya Polynesia uu ku geynayo, kaliya waa inaad raadisaa xulashooyin, tusaale ahaan Tahiti Voile et Lagoon ama Poe Charter ama maraakiibta raaxada ee Aranui 5, kuwaas oo shiraacda hal mar maalintii. bishii laakiin waxay kudhowaad yihiin 3 euro todobaadkii. Haddii aad haysato doon aad leedahay markaa waxaad ka bixi kartaa Galapagos ama jasiiradaha Cook.
si aad ugu dhex wareegto Jasiiradaha Marquesas waad duuli kartaa, inta udhaxeysa labada jasiiradood ee waaweyn waxaa u dhexeeya hal ama laba duulimaad maalintii. Jasiiradaha Ua Pou iyo Ua Huka nasiib kuma lahan duulimaadyada maalinlaha ah. Fikrad fiican waa inaad iibsato Marquesas waxay la baxdaa Tahiti Air. Waxaad sidoo kale ku guuri kartaa doon, shaqaaleeyo maxalliga ah, kireeyso doontaada Waxaa jira doon wadaage ah oo ku taal Marquesas del Sur, oo tagta jasiiradda Tahuata iyo Fatu Hiva (qiyaastii 65 euro safar wareeg ah oo safar shan saac ah)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Guides » Jasiiradaha Marquesas, janno